Fianarana teny sinoa: mendrika ny Confucius eto amintsika | NewsMada
Fianarana teny sinoa: mendrika ny Confucius eto amintsika
Firenena mandroso i Sina ary maro ny Sinoa mpandraharaha misandrahaka manerana izao tontolo izao ka anisan’izany ny eto amintsika. Manoloana izany, tsy azo ialana ny fifandraisana sy ny fifaneraserana, miainga amin’ny fahaizana ny tenim-pirenen’izy ireo. Izay indrindra ny nahatonga ny fananganana ny oniversite Confucius, mampianatra teny sinoa, eny Ankatso, tamin’ny taona 2008. Tsy eto amintsika irery fa miparitaka amin’ny firenena maro ity oniversite ity. Araka ny fantatra, mandritra ny fampirantiana, tafiditra ao anatin’ny « Andro ho an’nyy kolontsaina sinoa », eny Ankatso, anisan’ny mendrika indrindra ny oniversite Confucius eto Antananarivo.
Raha miisa 500 ity sekoly ambony ity, manerana izao tontolo izao, iray amin’ireo 15 nahazo io fankasitrahana manokana io ny eto amintsika. Marihina fa mihamaro hatrany ny tanora malagasy liana amin’ny fianarana teny sinoa. Porofon’izany, nananganana oniversite Confucius ihany koa ny any Toamasina, tamin’ny taona 2014, noho ny hetahetan’ny tanora any an-toerana.
Tsy mena-mitaha amin’ny any an-kafa ny fahaizan’ny tanora malagasy mivoaka amin’ity sekoly ambony ity, araka ny fanazavana hatrany. Nitohy, omaly, tamin’ny alalan’ny fandefasana horonantsary sinoa, moa ity « Andro ho an’ny kolontsaina sinoa » ity.